Elon Musk's Starlink Satellite Network Kwadoro | Akụkọ akụrụngwa
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ kemgbe Elon Musk gosipụtara nnukwu ọrụ a kpọrọ Starlink. Ọ bụ oru ngo nke SpaceX. Site na oru ngo a, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ itinye ya na orbit Satẹlaị 4.425 ga-enye Internetntanetị brọdbandị maka ụwa dum. Ọ bụ nnukwu ọrụ, nke Federal Communications Commission of the United States (FCC) mechara kwado ya.
Mgbe ọtụtụ afọ nke atụmatụ na ekele maka nnukwu ego dị ka nke Google, ọ dị ka Starlink ji nwayọọ nwayọọ bụrụ eziokwu. Ebe ọ bụ na emechara ikike ikike ahụ. Nke a pụtara na Elon Musk ga-agbada ahịa. N'ihi na ndi FCC eweputala oge.
FCC enyochala oru ngo nke onye guzobere Tesla na SpaceX. N’ikpeazụ, ha enyela ya ikikere nke ọ ga-eji tinye satellites 4.425 n’ime ya. Ekele ha, a ga-enye atntanetị na ọsọ ọsọ gigabit, na njedebe kachasị nke 25 ms. Ọ bụ ezie na atụmatụ mbụ bụ maka Starlink iji mejupụta satellites 12.000.
Ma n'ikpeazụ Enwere ike ịnweta ikike maka 4.425. All nke ha ga-networked na ga-enwe otu ugboro. Na mgbakwunye, ha ewepụtala oge. Ebe FCC gwara gị nke ahụ opekata mpe 50% ga-agagharị ma na-arụ ọrụ nke ọma tupu Machị 29, 2024.
Ọ bụrụ na ụbọchị gafere ma nke a emezughị, a ga-ewepụ gị akwụkwọ ikike gị. Ya mere, Elon Musk nwere afọ isii maka Starlink iji rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ịma aka nke ha na-arụ ọrụ ugbu a na SpaceX. Ma ọ dịkarịa ala, ha kwesịrị.
FCC ajụọla Eloọn Musk maka atụmatụ mpekere oghere zuru ezu.. Ebe ọ bụ na ị ga-amata ihe ga-eme satellites ndị a mgbe ha ruru na njedebe nke ndụ ha bara uru. A na-atụ anya ịkọ akụkọ ahụ n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Starlink: Elon Musk si na ntanetị satịlaịtị brọdband nke 4.425